Noocyada jarmalka ah ee Jarmalka oo aan lahayn alxanka (guga)
Noocyada tuubada jarmalka ee bilaa xadhkaha leh (oo leh guga) xawaare tuubada caleenku waa nooc kale oo nooc ka mid ah noocyada tuubada jarmalka ee bilaa xididka ah, kaas oo ah caleen guga gudaha galka suunka. Naqshadeynta asymmetric-ka waxay ka hortageysaa inuu tuubadu xirmo marka la adkeynayo isku xirida, taas oo xaqiijin karta isu gudbinta ciidamada iyo amniga rakibaadda inta lagu gudajiray adkeynta. Isku-darkaani wuxuu yareyn karaa dhibco indha la '.
Nooca dhuumaaleysiga Jarmalka ee birta garabka la'aan
Noocyada tuubada tuubada Jarmalka waxay kaga duwan yihiin qalabkayaga dirxiga gawraca ah ee caalamiga ah taas oo loogu talagalay in looga hortago waxyeelada tuubada inta lagu gudajiro.
Noocyada tuubada jarmalka
Noocyada tuubada jarmalka ee Jarmalka waxay leeyihiin 9mm iyo 12mm bandwidth, Dheeh isku dhejis ah oo dhexda ku jira.
Nooca dhuumaaleysi ee Jarmalka ayaa gacanta ku haya
Noocyada tuubada tuubada Jarmalku gacanta ku hayaan waxay la mid yihiin nooca dhuuxa garaaca ee Jarmalka. Waxay leedahay laba bandwidth oo 9mm iyo 12mm ah. Gacanta caagga ah ayaa lagu darayaa miiqalka.